Ny fampifandraisana ireo mpandray anjara sy ireo vondrom-piarahamonina amin'ny ambaratonga voalohany dia afaka mandrisika ny fitantanana eo an-toerana ho an'ny tranokala fanarenana noho ny fahatsapana ny fananana tetikasa. Ny fametrahana ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana miaraka amin'ny fizaràna iombonana amin'ny tetikasa dia tena zava-dehibe amin'ny fahombiazana sy ny faharetana. Ny fanaovana izany dia mety hitarika amin'ny fitantanana ny harena, ref ary manampy amin'ny fampihenana ny fandaniana amin'ny fanomezana fanampiana ny zana-tsokajy, ny fikojakojana ny zana-pokonolona, ​​ary ny fandehan'ny mpiasa an-tsitrapo. Any belize, ohatra, ny fikambanana Fragments of Hope dia manome fivelomana hafa ho an'ny mpanjono sy ny fizahan-tany mandritra ny vanim-potoana ivelan'ny vanim-potoana ary manana ny toeram-piasana miorina amin'ny famerenana ny haran-dranomasina izay manana tompon-daka amin'ireo vatohara naverina indray.
Fampahalalana momba ny famerenana amin'ny laoniny an'i Caribbean Acropora
Vahaolana ara-tontolo iainana amin'ny fahasimbana amin'ny vatohara: Manatsara ny famerenana amin'ny laoniny ny vatohara any Karaiba sy ny Atlantika Andrefana
Ny Fandaharan'asan'ny Fandaharan'asan'ny Coral Restoration Foundation